Umhla My Pet » G-ndawo Facts Neentsomi
Uzama ukufumana yakho G-ndawo? Lixesha ephakamileyo ukuba uyeke nokusukelana isanga phule ukuba ubomi ngesondo esempilweni kunye neqabane lakho.
Kukho izigidi abafazi ukuze lowo kukukhangela le orgasms G-spot emangazayo zange uphele. Abasetyhini banqwenela olu hlobo kwincanca nangona abafumana orgasms ibhuthstrephu egqibeleleyo.
Iyinyaniso ukuba orgasms lobufazi ngokuqhelekileyo kakhulu ngaphezu orgasms kwafezekiswa ekukhuthazeni ibhuthstrephu; nokuba, le orgasms ezifunyanwa uninzi amabhinqa ibhuthstrephu kwindalo.
Nangona kukho nto imbi ekubeni orgasms kuphela ekukhuthazeni ibhuthstrephu, zeemposiso ezinxulumene iziphumo G-ndawo yanto nokucutheka ngokwesondo self-esteem kwi kwabasetyhini abangakwaziyo ukuphumeza kakhulu bethetha G-spot kwincanca. Into Funniest apha kukuba abaphandi nangoku aluyithembanga malunga ubukho G-ndawo.
G-ndawo okanye Grafenberg itshatshazi igama lawo ukusuka gqirha waseJamani Dr. Ernst Grafenberg, ngubani bethethe ngalo kwizowuni inkanuko ngaphakathi kwilungu lobufazi, kufutshane urethra ngowe- 1950. Engaphezulu kwe 60 sele kudlule iminyaka ukususela Kwacetyiswa ngugqirha waseJamani, kodwa akukho nangoku akukho ubungqina obucacileyo bokuba G-spot ngayo, leyo ebangela ukuba abantu abaninzi bakholelwa ukuba loo nto nje intsomi.
A Uphononongo lwakutsha nje epapashwe kulindixesha yezonyango Anatomy Clinical kubonakala ukuba ekugqibeleni yagqabhuka ntsomi ezingqonge G-ndawo. Ngokolu phando, ingcamango yokwahlula orgasms zibe G-spot-kwavusa, lwesini ibhuthstrephu kuphosakele ngokupheleleyo. Abaphandi inxaxheba kuphononongo wathi gama kuphela ukuba ubani kufuneka isebenzise zonke iintlobo orgasms ezifunyanwa kwabasetyhini “kwincanca ababhinqileyo”.
Ngexesha naye wathi, sexologists wazi ukuba “ikhozo kunye yangaphakathi”, ukuba umhla nakholwa ukuba zivuse orgasms lobufazi, nje yintsomi. Ikhozo ulisebe yangaphandle kwaye udlala indima ebalulekileyo ekuboneleleni abafazi uyolo omkhulu ngokusebenzisa imilie; yiyo leyo.
Umele ukuba weva abantu besithi ingqondo abantu inkulu sex ilungu kufuneka. Olu phando entsha kwakhona ecebisa into efanayo. Ngokolu phando, orgasms nemazi ngokuqhelekileyo ngengqondo.
Ke oosonzululwazi bafumanisa ukuba kwabasetyhini ulwaneliseko ngokwesondo phantse kusoloko lusekelwa phezu imilie lobufazi. Oku Kulungile; kodwa abafazi kufuneka baqonde ukuba ngenxa yokuba imizimba ezinobunzima, akanakuba orgasms ukuze ngokulula abantu. Ngaphezu koko, abafanele bazive bephantsi ngenxa nje yokuba ziyasilela ukuphumeza kwincanca nje ngokusebenzisa ezinokungena.
Ewe, uya kudibana abasetyhini abaya kuthi ukuba sihlale bafumana orgasms emva kwabo G-itshatshazi lithe ibetheke amaxesha ambalwa. Ukuze ku xo; nokuba, iingcali zikholelwa ukuba abafazi ndiyabona njengoko G-spot ukuvuselela leyo ethe uvuselelo yangaphandle ephantsi bengaqondanga.
Kufuneka uyazibuza ukuba kutheni uvakalelwa efanayo. ngoku, oko imibuzo ephathelene; ingcaciso mzali mhlawumbi kuba imizimba ezahlukeneyo esibaziyo siziphatha ngolunye kwizivuseleli ethile.
Kukho kunokuba ingcaciso engaphezulu yenzululwazi, kodwa kutheni enze izinto ezintsonkothileyo. Okukhona uya ucinga ukuba kuya kuba QUOTIENT esezantsi ulwaneliseko yakho; ukuze, baphumle nje abone ngesondo.